दुखद खबर ओमिक्रोन संक्रमित पहिलो ब्यक्तिको मृत्यु ! - jagritikhabar.com
दुखद खबर ओमिक्रोन संक्रमित पहिलो ब्यक्तिको मृत्यु !
कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिम विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ। हालसम्म विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा यो नयाँ रूपका संक्रमित फेला परेका छन् ।
यद्यपी यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । एक दिन अघि, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ओमिक्रोनबाट संक्रमित पहिलो व्यक्तिको मृत्युको पुष्टि गरे।
ओमिक्रोनको मृत्युमा बेलायती प्रधानमन्त्रीले के भने ? उल्लेखनीय कुरा के छ भने ओमिक्रोनबाट संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि गर्ने बेलायत पहिलो देश हो।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले खोप क्लिनिकको भ्रमणमा भने, यो सत्य हो कि ओमिक्रोनले उच्च अस्पतालमा भर्ना दरहरू निम्त्याइरहेको छ र दुर्भाग्यवश कम्तिमा एक ओमिक्रोन संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको छ। यो सबै जानकारी दिएपछि जोनसनले मृ त कको उमेर कति थियो र उनलाई कुनै रोग थियो वा थिएन वा ओमिक्रोन उनको मृत्युको मुख्य कारण थियो भन्ने कुरा भनेनन्।
बेलायतमा हालसम्म कोभिडबाट मृत्यु हुने मानिसको औसत उमेर र ओमिक्रोनबाट बिरामीको मृत्यु भएको रिपोर्टले डराउनुपर्ने केही छैन भन्ने प्रष्ट भएको बेलायतका एक शीर्ष चिकित्सकले बताएका छन् ।